प्रकाशित मिति : : शुक्रबार, भदौ ८, २०७५
बलिउडकी हट अभिनेत्री सन्नी लियोनले नेपाली फिल्म खेल्ने पक्का भएको छ । उक्त फिल्ममा भिलेन टर्न हिरो अभिनेता अनुपबिक्रम शाहीले सन्नीसँग स्क्रिन सेयर गर्दैछन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार करोड बढी भारतीय रुपियाँ लिएर सन्निले नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’मा अनुबन्ध भएकी हुन् । सम्पुर्ण छायाँकन बेलायतको लण्डन आसपास हुने फिल्मलाई सम्राट बस्नेतले निर्देशन गर्दैछन् ।
यहि अगस्ट २६ बाट फ्लोरमा जाने फिल्मको लागी सन्नी लण्डन आउँदैछिन् भने शुक्रबार मात्रै अनुप प्रस्थान गर्नेछन् । छायाँकार तथा प्राविधिक सहितको टोली यसअघि नै नेपालबाट बेलायत पुगिसकेको छ । फिल्मलाई बिक्रम जोशीले निर्माण गर्न लागेका हुन् । बिक्रम फिल्ममा अनुप र सन्नीसँगै लिड अभिनयमा रहनेछन् ।
एबि इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बन्ने फिल्मलााई सौरभ लामाले खिच्नेछन् । कोरियोग्राफी रामजी लामिछानेको रहने कन्फर्म भएको छ ।
कसरी भएको थियो प्रियंका र निकको भेट ?
काठमाडौंमा २ अर्वको लगानीमा दक्षिण एशियाकै पहिलो ‘स्काईवाक’ बन्ने
प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन
प्रतिनिधिसभा बैठक : महिला हिंसाविरुद्ध कानून कार्यान्वयन माग
गृहमन्त्रीले टिचिङमा योगेन्द्रलाई के भने ?
कञ्चनपुर घटनाका घाइतेलाई गृहमन्त्रीले भेटे,उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने